Indlu esemaphandleni eNyanza Bay - eBaddeck - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni eNyanza Bay - eBaddeck
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguThierry & Lisa
UThierry & Lisa yi-Superhost
Indlu esemaphandleni ejongene namachibi aseBras d'or, Indlu Esemaphandleni ese Nyanza Bay iyibona kakuhle indalo. Le ndawo yokuphola yabucala ikwimizuzu eyi-2 ukususela ekuqaleni kweCabot Trail, kwimizuzu eyi-10 ukusuka kwidolophu yaseBaddeck kwaye ifumaneka lula ngeTrans Canada Highway. Abanikazi abahlala kwindlu enkulu kunye ne-Bulldog yabo "Ruff" bangabaphathi beehotele ezinamava ukuze uqiniseke ukuba usezandleni ezilungileyo kwi-Cottage ese-Nyanza Bay.
I-Nyanza Bay inikezela ngamanzi amahle okuloba, ukuhamba ngesikhephe okanye ukuqubha. I-Nyanza Bay inezinto ezimbini ezidibeneyo ze-Bald Eagles, ii-Eagles ezimbini ezidla ngokuzipholela ngaphezu kwendlu esemaphandleni kwinto eyenziwa ngabanikazi bayo "i-E Eagle Tree". Indlu esemaphandleni eNyanza Bay inomthunzi nelanga imini yonke. Indlu esemaphandleni ihamba ne-bBQ ye-propane (i-propane enikezelweyo), isitovu esisebenza nge-induction, ifriji, i-microwave oven, i-toaster, i-cooler yamanzi (amanzi anikezelweyo), kunye nendawo yokubasa umlilo yombane. Kuqukwe kwindawo yokuqeshisa ngabantu ababini abakwiKayak neebhatyi zobomi. Indlu esemaphandleni eNyanza Bay, eyakhiwe ngo-2018/ 19 inezibonelelo zasebusika ezipheleleyo unyaka wonke. Indawo entle yokuphola ehlotyeni okanye iholide emnandi yasebusika ikulindile! Le ndlu isecaleni kwezinye zezona ndlela zintle zokuhamba ngekhephu neendawo zokuloba emkhenkceni eCape Breton (i-Ice Shanty inikezelwe ngaphandle kokubhataliswa i-ice ehambelana nezikhokelo zokhuseleko).
4.85 · Izimvo eziyi-94
Indlu esemaphandleni eNyanza Bay inemfihlo nendalo ibe ikufutshane nezinto ezinokusetyenziswa ezininzi. Idolophu yaseBaddeck yimizuzu eyi-10 xa uqhuba kwaye ineevenkile zezipho, iivenkile zokutyela, imyuziyam iAlexander Graham Bell, nokunye okuninzi. Ekuqaleni kweCabot Trail yimizuzu eyi-2 kuphela ungachitha imini uqhuba iCabot Trail uze ubuyele kwiCottage ukuze ubukele ukutshona kwelanga elihle eNyanza Bay. Kwimizuzu eyi-2 emva kwendlu esemaphandleni uza kufumana iHerring Choker Deli, iBig Spruce Brewing Company, iWagmatcook Gas stop kunye neVenkile yezinto ezilula, kunye nevenkile yezipho ezidumileyo ze- "Red Barn" kunye nevenkile yokutyela. Ukuba utyelela ebudeni beenyanga zasebusika, Indlu Esemaphandleni eNyanza Bay ikwimizuzu eyi- ukusuka eNtabeni yeHunter apho uza kufumana iindlela zokuhamba ngekhephu ezikusa kuzo zonke iiCape Breton Island.
Umbuki zindwendwe ngu- Thierry & Lisa
Thierry & Lisa are seasoned hotel managers currently operating hotels in Nova Scotia. When not at work they enjoy being outside enjoying the beauty of Cape Breton, love travell…
Njengoko abaphathi beehotele abanamava bezinto eziyimfihlo kunye nobulumko buza kubanikazi bendlu okwesibini. Kwangelo xesha, kufuneka ufune indlela yokuya, amacebiso ngeendawo onokuya kuzo nezinto onokuzibona nceda ungonqeni ukubuza. Abanikazi uThierry noLisa bachitha ixesha labo elininzi ngaphandle besonwabela ubuhle be-Nyanza Bay ukuze bangaze babe kude.
Njengoko abaphathi beehotele abanamava bezinto eziyimfihlo kunye nobulumko buza kubanikazi bendlu okwesibini. Kwangelo xesha, kufuneka ufune indlela yokuya, amacebiso ngeendawo ono…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Victoria, Subd. B